မင်းတစ်ယောက်သာ Artist : နေမျိုး
Vers 1: လေပြေညင်းတွေ တိုက်ခတ်မှ သာယာပါတယ် ချစ်သူအပြုံး အချိန်တိုင်းမှာ အနားရှိမှ ပျော်ရွှင်ပါတယ် ချစ်သူအပြုံး Vers 2: အိပ်မက်ထဲက ထုတ်လို့မရ ကြင်နာသူရေ မင်းမျက်ဝန်း ဘယ်လိုမှကို မေ့လို့မရ ကြင်နာသူရေ မင်းမျက်ဝန်း CHO: တစ်ယောက်တည်းသာ မင်းတစ်ယောက်တည်းကိုချစ်တာ တစ်ယောက်တည်းသာ မင်းတစ်ယောက်ပဲမြတ်နိုးတာ မင်းတစ်ယောက်သာ ငါ့ဘ၀မှာအလိုချင်ဆုံး မင်းတစ်ယောက်သာ ငါ့ဘ၀ရဲ့အလိုအပ်ဆုံး SOLO: Vers 3: မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးဖူးတဲ့ကြင်နာသူရေ မင်းအချစ်မျိုး ကျန်နေရစ်ပါစေ အမြဲချစ်မယ့် ကြင်နာသူရေမင်းကိုလေ Vers 4: အိပ်မက်ထဲက ထုတ်လို့မရ ကြင်နာသူရေ မင်းမျက်ဝန်း ဘယ်လိုမှကို မေ့လို့မရ ကြင်နာသူရေ မင်းရဲ့အပြုံး Solo: CHO:
Labels: Myanmar Song POP
posted by chitsanm at 8/01/2008 07:24:00 PM2comments
နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ Artist : ထက်နေကြည်
ညလေးများ… ကိုယ်အိပ်ပျော်ဖို့ခက်နေ… အာရုံမှာအိပ်မက်များမှာလည်း မင်းမျက်နှာ… ငြိမ်သက်ပြီးစောင့်… ကိုယ့်ရင်ကို တစ်ခါပြန် လှုပ်ခတ်ဖို့ ဆွဲငင်တဲ့မင်းဟာ သိပ်ပြီးတန်ခိုးကြီးတယ်… မြေပြင်ကမ္ဘာ ဟိုကောင်းကင်ကြီးထက်မှာ… နေရာတကာ ကိုယ်ထင်ပြနိုင်တဲ့မင်းပေါ့ကွာ ရှောင်လို့ တိမ်းလို့ မလွတ်နိုင်ပါ… ကြုံဆုံတဲ့မင်းနဲ့ဘ၀ ရှေ့ကိုဘယ်လိုများ ရင်ဆိုင်ရမှာ… CHO : နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ရှေ့တိုးမိ… မေ့ပျောက်ဖို့အားထုတ်မှ ပိုမိုကာသတိရမိ.. နောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ကိုယ်ရှေ့တိုးမိ… မေ့ပျောက်ဖို့အားထုတ်မှ သတိကရနေပြန်မိ… အားနည်းချက်တွေရှိလို့ ရှောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သူမှာ အသည်းနှလုံးရဲ့ခြေလှမ်းကို တားလို့မရပါ… CHO
posted by chitsanm at 6/11/2008 12:28:00 PM0comments
သီချင်းလက်ဆောင် Artist : ချမ်းချမ်း
အချိန်တွေရယ် စက္ကန့်တိုင်းရယ် ရှင်သန်ပြောင်းလဲ မင်းကြောင့်ပါ အချစ်ရယ်… ရင်ခုန်သံ သီချင်းလေးများစွာ ရင်မှာမွေးဖွား ဖူးပွင့်လာတယ်… CHO : ပျော်ရွှင်စရာ သီချင်းလေး မင်းကိုဆိုပြမယ် အကြင်နာချစ်ခြင်းတွေရယ် မင်းကို ရည်ညွှန်းတယ် ချိုမြိန်တဲ့အနမ်းလေး လက်ဆောင်ထည့်ထားမယ် အချစ်သီချင်းလေးတွေ မင်းအတွက်… သံစဉ်တွေ ပြောင်းလဲသွားလည်း ဘယ်ခါမပြောင်းလဲ မင်းအကြောင်းပါ အချစ်ရယ်… စကားလုံးများ ဆန်းသစ်သွားလည်း မြင်ယောင်အတွေးထဲ အို… မင်းတစ်ယောက်တည်း… CHO မင်းအနားမှာ ဒီသီချင်းလေး အမြဲတမ်းဆက်ဆိုမယ် ကိုယ့်အသက်ရှိနေတဲ့ အချိန်တိုင်း… CHO ဒီသီချင်းလေးတွေ မင်းအတွက် အို…
Labels: Myanmar Song ROCK
posted by chitsanm at 6/11/2008 12:25:00 PM0comments
ငယ်ချစ်ပုံပြင် Artist : ခိုင်ရွှေဝါ
အချိန်နာရီရထားလေး အမြန်နှုန်းပြေး မိုင်တိုင်များလည်းကျော် အတိတ်ကိုသာ သိမ်းဆည်း စေချင်သူ… ကြင်နာစွာ ရှုပ်ပြေးသော အချစ်မိုးများ ရင်ခုန်တတ်စမှာ မင်းလက်ဆောင်အနမ်းလေး ငါလွမ်းသည်… အချည်းနှီးပါဆိုတာ ဆိုပါ ငါလက်မခံခဲ့ပါ ပန်းပွင့်တွေကို လေထဲမှာမြှောက်ကစား ပန်းပွင့်ကြွေတွေ ပြန့်ကျဲကုန်တာ မြက်ခင်းစိမ်းဆီမှာ မင်းအချစ်သာ မွှေးရနံ့ ထင်စွဲလာ… CHO: အို… ပုံပြင်လေးရေ ဘယ်ရောက်သွား အနေဝေးရင် အိပ်မက်များ အေးခဲနေ မာကျောသွား အတူပြန်ဆုံတွေ့တော့ မြို့အ၀င်လမ်း တောင်စဉ်တန်း တခြားဘက်မှာ ပြန်ဆုံတွေ့ရင် ငယ်ချစ်က အမှတ်ရသေးရင် နှုတ်ဆက်ပါ… ကြယ်ရောင်လို ပျောက်သွားလိုက် မြင်ရလိုက် တိမ်တိုက်များထဲမှာ မင်းရင်ခွင်မှန်းဆ ရင်ခုန်သူ…
posted by chitsanm at 6/11/2008 12:20:00 PM0comments
အဝေးထွက်သွားသူ Artist : ရတနာမိုင်
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မင်းပြောဖူးခဲ့တာ ဆံနွယ်ရှည်ဆို သိပ်မြတ်နိုးတတ်တာ ညင်သာစွာ ခြေလှမ်းလေးများလှမ်းတိုင်းမှာ ကြယ်ရောင်စုံတွေ ၀င်းလက်ပြိုးပျက်သွား… ကြင်ကြင်နာနာ စကားများပြောတိုင်းမှာ ရယ်သံချိုတွေ မင်းနှစ်သက်ခဲ့တာ နေညိုချိန်တို့လမ်းခွဲရတဲ့အခါ နာရီတွေကို မင်းမုန်းတီးခဲ့တာ…. CHO: ဒါတွေမေ့ကာ အဝေးထွက်သွားသူရာ ရင်ခွင်အသစ်မှာ မင်းပျော်လို့နေမလား အချိန်ရှိတိုင်း မြတ်နိုးစွာနမ်းနေကြ ဆံနွယ်လေးတွေ မေ့လိုက်လား … အတူကြည်နူးချိန်တိုင်းမှာ ပြောနေကြ ကတိစကားတွေ ပျက်ပြယ်သွားပြီလား ပုံပြင်ဟောင်းလို စွန့်ပစ်ထားတာလား မှုန်ရီသွားပြီ တို့အချစ်ည ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလား (အလွမ်းများ…)… Rep 1 : ဝေးခဲ့တဲ့အချစ်တွေနဲ့ ပြန်ဆုံဆည်းဖို့ တောင်းတခဲ့လည်း ကုသိုလ်ရင်မှာ နည်းခဲ့တော့အခုဆိုရင်မှာ အသည်းကွဲပေါ့ ကြင်နာသူမင်းမရှိလို့ ရင်မှာအပူမီးအတိပေါ့ အပြင်ကမ္ဘာထုကြီးသိပေါ့ ရင်ခုန်စွာ နှစ်သက်ဖူးတဲ့ ရယ်သံတွေကိုမေ့လိုက်တော့ နင်ကိုယ်တိုင်မုန်းတီးခဲ့တဲ့ နာရီတွေပေါ်စီးမျောတော့ မထင်မှတ်ဘူးရင်မှာရူး ငါလေဇွတ်မချစ်တော့ပါဘူး စိတ်ရမ္မက်ကို အိပ်မက်ဖို့ အတိတ်ရက်ကို မလွမ်းတော့ပါဘူး ဟူး ရေး ဟူး ရေ…. Rep2: ပတ်သက်ခဲ့ အမှားတွေအတွက် ရက်စက်တဲ့ စကားချက်နဲ့ နှစ်သက်သက်မဲ့ ထားခဲ့တယ် တစ်ဖက်သတ် စွပ်စွဲချက်နဲ့ အလွမ်းများ ငါ့အတွက်အလွမ်းများ… ဖြေသိမ့်မယ့်ဆေး ရှာပေးပါမတောင်းဆိုချင်ဘူး (အလွမ်းများ) ငါ့အတွက်အလွမ်းများ ရင်ထဲမှာမင်းအကြောင်းတွေ မတွေးချင်တော့ဘူး(အလွမ်းများ) ငါ့အတွက်အလွမ်းများ … ဟူး.. ဟူး.. ဟူး.. ရေ CHO
Labels: Myanmar Song HIPHOP
posted by chitsanm at 6/11/2008 12:11:00 PM0comments
မောင့်ကိုချစ်ရင် Artist : CARTOON
မောင့်ကိုချစ်ရင် မောင့်ကိုချစ်ရင် … ပြောနေမြဲ… တကယ်တမ်းကျတော့ နင်ကအ၀တ်အစားပဲ ဈေးရောက်ရင်ဝယ်ခဲ့ပါ အင်္ကျီတစ်ထည် အလုပ်တွေရှုပ်လို့မရောက်ဖြစ်ဘူး လိမ်ပြောတယ် နိုက်ကီနဲ့ အဲဒီဒက်စ်ကို မောင်ကြိုက်တယ် နင့်အကြိုက်ကို လိုက်ခဲ့တာကုန်တော့မယ်… အ၀တ်အစားကို နင်ကချစ်တာလား မင်းပြောစမ်းပါ… ငါ့ကိုရင်တွင်းစကား အတူသွားကာ ဈေးထဲရောက်ရင်ဟိုငေးဒီငေး ကြိုက်တာတွေ့ရင် လက်တို့ပြီးဝယ်ပေး ၀ယ်ပေး ဘယ်လောက်လဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ အမယ်လေး အမယ်လေး… အချစ်ဆိုတာကိုမသိ အ၀တ်အစားကိုကြည့် လိုချင်ပြီဆို နင့်မျက်နှာကပြုံးစိစိ နင့်ကိုငါကချစ်နေတော့ အရှုံးအမြတ်မကြည့် သုံးသပ်ကြည့် မှန်လား မှားလား ရုန်းထွက်မရတော့ ကံဆိုးသွား ငါ့ရဲ့စိတ်က ဘာဖြစ်သွားလဲ နင့်နဲ့ကျမှ မင်းဆန္ဒကိုလိုက်လျောလို့ ငါ့အကြွေးများ … မစားရက်မသောက်ရက် စုထားတဲ့မုန့်ဖိုး နင်နဲ့တွေ့ရင် လစ်ဗင်းကာလာ ၀င်သွားတာကုန်လို့ ချေးထားတဲ့သူတွေက ငါ့ကိုရန်လုပ် တစ်ပတ်အတွင်းမပေးနိုင်ရင် အိမ်နဲ့တိုင်မလို့ မလုပ်ပါနဲ့လို့ ချော့မော့ပြောပြီး တောင်းပန်ရလို့ အခုငါမောပြီ … အပြေားလေးနဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ငါ့ကိုမြူဆွယ် နင့်ကိုငါလေးစားတယ် နင်လူလည် အပေါင်းအသင်းတွေပြောလည်း ငါမမှုတကယ် ရိုးသားပြီးအလှကြိုက်လို့ ငါထင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ငါ့ကိုတော့ကြင်နာပါကွယ် နင်ပစ်သွားရင် ငါကရင်နာမှာပဲ … နင့်ခါးဆိုဒ်တောင် အလွတ်ရပြီ သာတီတူး တီရှပ်ဆိုရင်နင်ဝတ်တာ အိတ်အိတ်အယ်လ် ဦးထုတ်ဆိုရင် နယူအဲရာကို သိပ်ကြိုက်တယ် ဖိနပ်ဆိုရင် အောစတားပဲနင်စီးမယ် ငါသွားချင်တဲ့နေရာတွေကို နင်မလိုက်ပါ ချိန်းတွေ့တိုင်းသွားတတ်တာ ရှော့ပင်းစင်တာ မောပြီးပြန်လာ ခြေထောက်ညောင်းလို့ ဒါကိုမင်းကဂရုမစိုက် ရူးမိုက်စွာ ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာမယုံရပါ သုညပါ နင့်အချစ်က ဒါပေမယ့် ငါ့ကမေ့လို့မရ (အဲဒီတော့ပိုဆိုး နင့်အ၀တ်အစားဖိုး)၄ … မောင့်ကိုချစ်ရင် … မောင့်ကိုချစ်ရင် … ပြောနေအမြဲ မောင့်ကိုချစ်ရင် … မောင့်ကိုချစ်ရင် … အ၀တ်အစားပဲ (မောင့်ကိုချစ်ရင် … မောင့်ကိုချစ်ရင် …) ၂ လိမ်ပြောတယ် (မောင့်ကိုချစ်ရင် … မောင့်ကိုချစ်ရင် …) ၂ ကုန်တော့မယ်
posted by chitsanm at 6/11/2008 12:06:00 PM0comments
မညာတော့ဘူး Artist : Lကိုင်ရာ
အရှိကိုအရှိတိုင်းတာ ဖွင့်ပြောမိ မြင်မြင်ချင်းမင်းကို ချစ်သွားသည် ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသည်းကို အရှုံးပေးခဲ့ရ ဒါ. အချစ်ပဲလား စိတ်မှာမောသည်... နားလည်မှုတံခါးတွေ ဖွင့်ထားသည် အကြင်နာစကားလေးတွေ မျက်ဝန်းဆီ ပိုင်ရှင်မဲ့အချစ်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည် ကိုယ်..မညာတော့ဘူး မင်းကိုချစ်သည်... မင်း.. ပြုံးလိုက်ရင်လည်း အိပ်မက်တွေထိပဲ လိုက်နှောက်ယှက်သည် အိပ်မက်ထဲမှာလို ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့် ပြန်တွေးတိုင်း ရင်ခုန်လာသည်... ချစ်သူလေးရှိရာ ဟိုအဝေးဆီ လာရာလမ်းလေးကို မျှော်တတ်သည် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဘ၀ကို ပေးအပ်ခဲ့သည် ကိုယ်.. မညာတော့ဘူး မင်းကိုချစ်သည်...
posted by chitsanm at 5/31/2008 05:00:00 PM0comments
ကဗျာလေး Artist : Cobra
မင်းကိုတွေ့တဲ့နေ့ကစပြီး ရင်ခုန်သံတွေကို သံစဉ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလည်းတတ်လာခဲ့တယ် တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါ့နားကမင်း ပျောက်ဆုံးသွားမှာကို အရမ်းကြောက်မိနေလို့ မှောင်နေတဲ့ ည အခန်းလေးထဲ ဖယောင်းတိုင်လေးတစ်တိုင်ကို မီးညှိပြီး ရေးထားတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရင်မောတွေးလို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မင်းအကြောင်းဖြစ်နေလို့ ငါ့မှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ အံ့သြလို့နေခဲ့တယ် ကိုယ်တိုင်သေချာမသိတဲ့ မင်းအတွက်ကဗျာလေး ဘယ်တုန်းကရေးထားမိလဲ တွေဝေနေတဲ့ရုတ်တရက်မှာပဲ ငါ့ရှေ့က ဖန်ခွက်လေး လေမတိုက်ဘဲကျကွဲ ဒီအချိန်မှာပဲ ထူးဆန်းစွာနဲ့ ကိုယ့်အနားရောက်လာခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နတ်သမီးလေး တကယ်ထင်နေခဲ့တာ နောက်ဆုံးတော့ မင်းရဲ့ ပုံရိပ်ခလေးတာ ဖြစ်လို့နေခဲ့ ပိုင်ဆိုင်ဖို့လည်းရှိမရှိတော့မှန်း သိလျက်နဲ့ ငါဟာ တမ်းတနေတာ အချစ်ကြောင့်ပဲ ငါ့မှာရူးမတတ်ခံစား ကြေကွဲရပေမဲ့လေ ဘယ်လိုမှ ဖျောက်ဖျက်မရအောင် မင်းတစ်ယောက်ကိုပဲ ငါ. စွဲလန်းစွာချစ်ခဲ့… ဟူး.. ဟူး.. ဟူး… လိုအပ်ချက်တိုင်းကို မင်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးလို့ ဘ၀တစ်ခုလုံးကို ပုံအပ်ကာပေးထားလိုက်ချင် ဆုံတုန်းလေမင်းကို အနားမှာအမြဲထားပြီး ရင်ထဲကအကြောင်းတွေ (ထာဝရ ပြောပြချင်တယ်)၂
posted by chitsanm at 4/27/2008 12:53:00 AM0comments
တိတ်တိတ်လေးပဲချစ်သွားမယ် Artist : L စိုင်းဇီ
အမှန်တကယ် ဖွင့်ပြောပြချင်ပါတယ် ကိုယ်ချစ်ခဲ့တာအမှန်ကွယ် ကိုယ့်စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေရယ်… အမှန်တကယ် လှည့်စားဖို့ရာမရည်ရွယ် မျှော်လင့်ချက်များလည်း/ တာပြန်လည် ဟန်ဆောင်ထိန်းသိမ်းကာရယ် တကယ်ဆိုအသည်းကွဲဖို့ငါ ပိုကြောက်နေတယ် ဟိုအရင်သူမင်းကိုလေ တိုက်ဆိုင်ရင်ကွယ် CHO : မမြင်အောင် ပုန်းကာဝှက်ခါရယ် အကြင်နာဖုံးဖိထားပါတယ် ရင်ဆိုင် မင်းမျက်ဝန်းရဲ့အကြည့်တွေကိုနားလည်တယ် အပြင်မှာမသိသလိုပဲနေမယ် ရင်မှာရှိတာမင်းပါကွယ်/နေတာမင်းပဲ အစဉ်တာပေးဆပ်ရင်း မင်းနောက်ကွယ် တိတ်တိတ်ကလေးပဲချစ်သွားမယ်.. CHO:
posted by chitsanm at 4/26/2008 11:52:00 PM0comments
မင်းရဲ့ဆံနွယ်တွေ လေမှာလွင့်နေတယ်… ညင်သာစွာနမ်းရှိုက်ခွင့်ရချင်လည်း တကယ်ဆိုရင် ဝေး၀းကလှမ်းကြည့်ပြီး ရင်ထဲနူးညံ့အနမ်း လွမ်းနေယုံလေးပဲ… အိပ်မက်တာဆို ပြန်ငြိမ်နေလိုက်ပါမယ် ကြာလာရင်နာကျင်မယ်ငါသိတယ် ဒါဆိုရင်မခင်တွယ်အောင် လုံလောက်မဲ့အကြောင်းအရင်း မင်းဆီမှာရှာတာမတွေ့ခဲ့ဘူးကွယ်… ကိုယ်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ် မသိရအောင် မင်းစိတ်နဲ့တွေဝေပြီး ရှုပ်ထွေးရင်း ရင်ခုန်သံမကျယ်ခင် ငါမေးလိုက်ချင်တယ် နင်မမြင်လိုက်ရတဲ့ကြိုးချီသွားပြီ… CHO : မင်းနားရောက်ချင်ပြီ ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ ငါဟာ တစ်ယောက်တည်းထိန်းချုပ်ထားလို့မရနိုင်ပြီ ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ မင်းနဲ့နီးချင်ပြီ ကြာကြာတစ်ယောက်တည်း သိမ်းဆည်းထားရင် တကယ်ရူးသွားနိုင်သည်… အိပ်မက်တာဆိုရင် ငါငြိမ်နေလိုက်ပါမယ်.. ကြာလာရင်ရုန်းထွက်ဖို့ သိပ်ခက်မယ်… ဒါဆိုရင်မခင်တွယ်အောင် လုံလောက်မဲ့အကြောင်းအရင်း… မင်းဆီမှာမမြင်နိုင် ကိုယ်.. သိပ်ချစ်တယ်… ကိုယ်ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမယ်မသိအောင်… မင်းစိတ်နဲ့တွေဝေပြီးပူလောင်ရင်းနဲ့… ရင်ခုန်သံမကျယ်ခင် ငါမေးလိုက်ချင်တယ်… နင်မမြင်လိုက်ရတဲ့ကြိုးချီသွား.. ငါစိတ်ကူးနဲ့ရူး… CHO: အများက တားမြစ်ထားလည်း အဖြေကိုလိုချင်တယ်… ပျော်ရွှင်စရာက မင်းပဲဖြစ်တယ်နော်... စဉ်းစားခြင်းများသုံးမရ… အကောင်းဆုံးမင်းလေးပဲထင် ယုံကြည်တာကို ကူညီပေးကွယ်… ချစ်လေး… ရေ့… CHO: CHO: လာ…လာ…လာ..လာ..လာ.. မင်းရဲ့ဆံနွယ်တွေ လေမှာလွင့်နေတယ်… မကြာခင်မှာ နမ်းရှိုက်ခွင့်ရသင့်တယ်.. ငါ.. ဘယ်လိုရင်ခုန်သံ ညာလိုက်ရမှာလဲ… တို့ကြင်နာတဲ့အကြောင်း….ပြောတော့မယ်…
posted by chitsanm at 4/16/2008 05:55:00 PM0comments